पोखरा काण्ड,डाक्टरले खुलाईन पेट नदेखिनुको कारण, कण्डमको प्रयोगबिना बच्चा नुहुनेगरी कसरी शारिरिक सम्पर्क गर्ने ? (भिडियो) | पोखरा काण्ड,डाक्टरले खुलाईन पेट नदेखिनुको कारण, कण्डमको प्रयोगबिना बच्चा नुहुनेगरी कसरी शारिरिक सम्पर्क गर्ने ? (भिडियो) – हिपमत
पोखरा काण्ड,डाक्टरले खुलाईन पेट नदेखिनुको कारण, कण्डमको प्रयोगबिना बच्चा नुहुनेगरी कसरी शारिरिक सम्पर्क गर्ने ? (भिडियो)
पोखरा,पौष ८ गते ।डा इन्दु पुन पोखराकी पुरानो र चिरपरिचित स्त्रीरोग बिशेषज्ञ हुन् । पोखरामा लामो समय देखी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिहेकी इन्दुपुनसंग हामीले पोखरा नजिकैको गाउँमा घटेको घटनाको बिषयमा कुराकानी गरेका छौं । गत शनिबार पोखरा नजिकै आस्ताम गाउँमा एक अबिबाहीत केटीले बच्चा पाएर खाल्टोमा पुरीन् । कक्षा १२ मा पढ्ने केटीले यौन र यौनजन्य कृयाकलापका बारेमा सायद पाठ्यपुस्तकमै पढेकी होलिन तर पनि किन यस्तो हर्कत गरिन् ? कक्ष्ष १२ पास गरेकी केटीलाई यौनको बिषयमा स्वास्थ्य सचेतना दिन जरुरी छ ?
आरोपित भनिएकी केटीकी आमाले आफुले नौं महिनाको बच्चा पेटमा हुँदा पनि छोरी गर्भवती छ भनेर थाहा नपाएको जिकिर गरेकी थिईन । के साँच्चै पेट लुकाउन मिल्छ ? यौन सम्पर्क गर्नु अघि के कस्तो कुरामा सावाधानी अपनाउनु जरुरी छ र रोकावटका साधन (अस्थाई साधन) प्रयोग गर्दा गर्दै गर्भ रहेमा कसरी हटाउने यो बिषयमा डा। इन्दु पुनसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस् ।